ဘာကြောင့်ကြောင်တွေကိုကြိုက်ရတာလဲ Noti ကြောင်များ
မော်နီကာဆန် | | သိချင်စိတ်
၎င်းသည်တစ်ချိန်ကလူသားတစ် ဦး မိမိကိုယ်ကိုမေးခဲ့သောမေးခွန်းဖြစ်သည် ... ယနေ့ပင်သူကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ရံသူကိုယ်တိုင်မေးလေ့ရှိသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်လူတို့နှင့်အတူမနေလိုသောသီးခြားလွတ်လပ်သောအထီးကျန်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာမှန်ပါသည်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့မိသားစုတွေရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ငါတို့နဲ့ငါတို့မိသားစုဝင်တွေပါ။ ငါတို့သိသည်မဟုတ်။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။
သင့်မှာ feline သေးသေးလေးမရှိသေးရင်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် ဘာကြောင့်ကြောင်တွေကိုကြိုက်ရတာလဲ.
1.2 သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး furry သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်
2.2 Catlovers သည်ယဉ်ကျေးမှုကို ပို၍ နှစ်သက်လိမ့်မည်
ကြောင်များနှင့်လူများသည်မတူနိုင်ပါ - အချို့မှာမကြာခဏတွေ့ရခဲသော၊ အထီးကျန်သူများ၊ သတိမထားမိလို။ သူတို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုအိပ်ပျော်နေသောအိပ်မပျော်သူ၊ အခြားတစ်ဖက်မှအခြားသူများကမူကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထီးကျန်မှုကိုကြိုက်သော်လည်းများသောအားဖြင့်ဆေးပမာဏအနည်းငယ် (များသောအားဖြင့်) နှင့်များသောအားဖြင့်အိမ်ပြင်တွင်ပျော်မွေ့ကြသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သူ၏ချိုမြိန်သောအကြည့်များ၊ လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုချစ်မြတ်နိုးကြသည်။ ၎င်း၏မျိုးရိုးဗီဇအများစုကိုကျား၊ ခြင်္သေ့သို့မဟုတ် cougars ကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မျှဝေသည်.
ဒါကြောင့်အတိအကျပြောရရင်နောက်ဆုံးမှာကြောင်တွေဘာကိုအံ့အားသင့်စေတာလဲ။ ကောင်းပြီ သူတို့အိမ်မွေးမဟုတ်, သို့မဟုတ်မှာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည်ခွေးများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြောင်များနှင့်မတူဘဲကြောင်များနှင့်မတူဘဲလူသားတို့၏နှစ်သက်မှုကိုအမြဲရလိုကြသည်။ ကြောင်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတိုင်းသွားကြသည်။
သူတို့ကိုသင်လှည့်ကွက်များသင်ပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သာလိုချင်လျှင်သင်ယူလိမ့်မည်၊ သူတို့တစ်ခုခုပြန်ပေးလျှင် (အားရစရာ၊ ပျော်စရာကောင်းသည့်ကစားပွဲနှင့် / သို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်း) ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ငါတို့ဟာ furry တိရိစ္ဆာန်တွေကိုကြိုက်တယ်။
အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ငါတို့ကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်များရှိသည့်အခြားသက်ရှိသတ္တဝါများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံကြသည်။ ကြောင်များသည်သားရဲတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းမွေးဖွားချိန်မှ စ၍ သူတို့၏အဆုံးအထိကစားခြင်းဖြင့်သူတို့၏အမဲလိုက်နည်းစနစ်များကိုစုံလင်စေသည်။ ကောင်းကောင်းအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ:
သူတို့ကိုသင်ချစ်မိလျှင်သူသည်သင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။ မင်းသူ့ကိုလျစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြုလိမ့်မည် သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရတဲ့ဘို့။
သူရောက်နေတာကိုသူတွေ့တဲ့အခါသင့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်တစ်ခါတလေသူထွက်ခွာတဲ့အခါမှာသူက "နှုတ်ဆက်တယ်" - meowing လို့ပြောပါတယ်။
သငျသညျသူ့ကို - ကြောင်များအတွက်အားရစရာပေးသောအခါသူသည်အလွန်ပျော်ရွှင်ရရှိနှင့် အများကြီးပို သငျသညျသူ့ကိုမီးခိုးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက်ကိုပေးတဲ့အခါ။
သင်သူ့ကိုတစ်ချိန်ကဆိုးဆိုးရွားရွားဆက်ဆံသည့်အခါဆက်ဆံရေးအားနည်းသွားပြီး၊ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ ထိုအရပ်မှကြောင်သည်သင့်ကိုတဖန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး furry သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်
သူတို့ကပျော်စရာကောင်းပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ၊ ချစ်ခင်တွယ်တာကြတယ်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုရယ်စေတယ်။ သူတို့တွေဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုမှကာကွယ်ပေးဖို့ခေါင်မိုးတစ်ခုတည်းနဲ့အစာကျွေးတဲ့အပြည့်ပဲ။ ကောင်းပြီနှင့်ကစားစရာများ၊ ကုတ်ခြစ်များ၊ အမှိုက်သရိုက်များ ... သို့သော် ငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလိုချင်တယ်ဒီတော့ဘဏ္expenseာရေးကုန်ကျစရိတ်ကစိုးရိမ်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့သည်ငါတို့မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ 🙂
သိပ္ပံပညာသည်မည်သည့်အရာကိုတွေ့ရှိသည်ကိုမသိဘဲဤဆောင်းပါးသည်ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကြောင်အပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများပြုလုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဤသို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးမြန်းလာကြသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဒါအမှန်ပဲ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်အသိသာဖြစ်ခြင်းသည်လူအများအတွက်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကြောင်တွေမှာခံစားချက်ရှိလား၊ မရှိလားတွေးမိတဲ့လူများစွာရှိသေးတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှတီထွင်ခဲ့သောပုံစံအားလူပေါင်း ၄၅၀၀ ခန့်အားဖြည့်ခဲ့သည်။ အရှေ့ လေ့လာ ၎င်းကိုစိတ်ပညာရှင် Sam Gosling က ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြေဆိုသူများကိုခွေးချစ်သူများ၊ ကြောင်ချစ်သူများ၊
အခြားသူများအကြား၎င်းတို့သည်မည်သို့သောလူစုလူဝေးဖြစ်လိုသည်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုရှိခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများရှိခဲ့လျှင်သိရန်အလို့ငှာမေးခွန်းများကိုဖော်စပ်ထားသည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ Golding စမ်းသပ်မှုအရကြောင်ချစ်သူများသည်စိတ်ကျေနပ်မှုနည်းသောစိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်မှုမရှိသော်လည်းပိုမိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အတွေ့အကြုံအသစ်များရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များဖြင့်ကြောင်ချစ်သူများကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်လူရွှင်တော်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်.
Gosling သည်သူ၏လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ပြီးလေးနှစ်အကြာတွင် Wisconsin ရှိကာရိုးတက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာပါမောက္ခ Denise Guastello သည်သူမကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများ၏စရိုက်ကိုသာမကသူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ရန်မလိုသောသူသည်ထိုအားလပ်ချိန်ကိုစာအုပ်ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြတိုက်များသို့လည်ပတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်ကြောင်ကိုချစ်သူများသည်ခွေးများကိုချစ်သူများထက် ပို၍ လိမ္မာပါးနပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့ ကြောင် - စွဲသည်အိမ်ရာနှင့်လူရွှင်တော်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သာဖြစ်ကောင်း, ဒါကြောင့်အခြားသူများအကြား Jorge Luis Borges သို့မဟုတ် Ray Bradbury ကဲ့သို့သောကြောင်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသူသို့မဟုတ်မသေ, အနိစ္စအနုပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာများဤမျှလောက်များစွာသောဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သင်လိုချင်လျှင်လေ့လာမှုကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ (အင်္ဂလိပ်လို
ကြောင်တွေကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆီကို phobia တစ်ခုခုတီထွင်ခဲ့တယ်၊ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မကြိုက်တာကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုဥပမာ, ဥပမာ, hamsters မကြိုက်ဘူး။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အဆုံးစွန်အတွက်သာဖြစ်ပါကလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောက်လွန်ရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လျှင်အထူးသဖြင့်သင်သည်ကြောင်များနှင့်တူသောသူနှင့်အတူနေထိုင်ရန်သွားလျှင်အထူးသဖြင့်စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ ဤသည်သံသယမရှိဘဲအတူတကွအများကြီးပိုကောင်းစေလိမ့်မည်။
ဒါတောင်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းမခိုင်းနဲ့။ အမည်၊ Phobias သည်တစ်ရက်မှနောက်တစ်ရက်မှအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုချဉ်းကပ်နေသောမည်သည့်ကြောင်ကိုမျှမထိုးပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရမည်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် သူတို့ကိုနားလည်ပေးပါဒီဟာကသင့်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Noti ကြောင်များ » ကြောင်များ » သိချင်စိတ် » ဘာကြောင့်ကြောင်တွေကိုကြိုက်ရတာလဲ
Yajaira လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ငါချစ်တယ်။ သူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်ရှိများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသည်စကြဝthatာတွင်နေထိုင်သောသတ္တဝါအားလုံးနှင့်တူသည်
Yajaira Lopez အားပြန်ပြောပါ
ဘုရားသခင်သည်ကြောင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင်ယူရန်၊ ကျား၊ ခြင်္သေ့၊ Panther၊ ကျားသစ်၊ cheetah စသည်တို့နှင့်တူသောကျား၊ သားကောင်နှင့်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ 😊